M/weynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay safiirrada Jaamacadda Carabta iyo Shiinaha ee ku sugan dalka Kenya – Radio Daljir
Diseembar 22, 2012 5:55 b 0
Nairobi, Dec, 22-? Madaxweynaha dawladda Federaaligaa ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa maanta kulamo la qaatay safiiradda Jaamacada Carabta iyo Shiinaha ee safaaradaha ku leh Kenya.
Kulanka uu m/weyne Xasan la qaatay safiirrada ayaa waxaa goob joog ka ahaa R/wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibada Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirka warfaafinta C/llaahi Ciil-mooge Xirsi iyo mas?uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Kulanka ay maanta yeesheen Madaxweynaha iyo safiirrada ayaa la soo sheegayaa in ay ku soo dhamaadeen guul iyo is afgarada sida uu wasiirka warfaafinta u xaqiijiyay warbaahinta gudaha.
M/weynaha iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale inta uu joogo Kenya waxaa uu la kulmi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkaasi
Dawlada Puntland oo joojisey shir lagu qaban lahaa Garoowe ( Dhegayso)